आधा सांसदको काठमाडौंमै छ घर, तर पनि लिन्छन् आवास सुविधा - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
आधा सांसदको काठमाडौंमै छ घर, तर पनि लिन्छन् आवास सुविधा
Published On : ६ बैशाख २०७५, बिहीबार १२:५०
काठमाडौं, ६ बैसाख । काठमाडौंमा संघीय संसदका आधाजसो सांसदको आफ्नै घर छ । तर, पनि उनीहरुले राज्यबाट आवासको सुविधा आनाकानी नगरी लिने गरेका छन् ।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पानी र बिजुलीको बिल सरकारले तिर्छ भने अरुले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो सबै जोड्दा मिलाएर एका सांसदले मासिक रुपमा तलब भत्ता र सुविधा वापत झण्डै ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । साथै एक महिनामा १० वटासम्म संसद बैठक बस्यो भने बैठक भत्ता र यातायात खर्च बापत २० हजार गरी कूल एक लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । अन्य पदाधिकारीहरुको भने सबै सुबिधा योभन्दा बढी हुन्छ । सुबिधासम्बन्धी संशोधित ऐनअनुसार कुनै सांसद अशक्त भएमा एकमुष्ठ ५० हजार पाउँछन् भने मत्यु भएका सांसदका परिवारले २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन् ।